Edemede Steve Kremer na Martech Zone |
Edemede site na Steve Kremer na -bụ mmadu
Amalitere m ịntanetị ma nweta adreesị ozi-e izizi m na mbido 1995. Na mbubreyo '95, ebidoro m azụmahịa azụmaahịa weebụ m. Inwe ụlọ ọrụ nke m pụtara ịbụ n'ịntanetị ma dịịrị ndị ahịa m oge niile. M na-etinye ya mgbe niile. Ọbụna na ezumike m wetara laptọọpụ NEC m na-agụ ugbu a. Ka oge na-aga, esonyeere m mmalite dị iche iche. Ọbụna mgbe ahụ na ezumike ọ tụrụ anya na m ga-etinye ma ọ dịkarịa ala ụfọdụ n'ime
E-mail abata. Obi dị gị ụtọ. Ọ bụ azụmahịa CPM dị oke elu site na nnukwu onye mgbasa ozi aha mgbasa ozi. Recognize maghị adreesị ozi-e nke onye zitere gị. Think na-eche n’obi gị: “Hmmn..exampleinteractive.com. Ga-enwerịrị obere ụlọ ahịa na-emekọrịta mmekọrịta nke isi akara ahụ na-eji ”. Na-ezigaghachi e-mail na-arịọ maka IO (Ntinye Ntinye) wee bido ileba anya na ngwa ahịa ad gị. With na-eso ha na-aga, na-achọsi ike inweta